हनिमुनका विषयमा विशेष सामग्री गज्जबको लाग्यो - प्रतिक्रिया - साप्ताहिक
मानिसले सहज व्यक्त गर्न नसकेको तर सबैलाई आवश्यक पर्ने (हनिमुन रोमाञ्च) हनिमुनका विषयमा विशेष सामग्री गज्जबको लाग्यो । नवविवाहित दम्पती मात्र नभएर सबै दम्पतीले समय मिलाएर वर्ष–दुई वर्षमा हनिमुन जानुपर्छ भन्ने कुरा एकदमै मनासिब छ ।
उपयुक्त समयमा (हनिमुन रोमाञ्च) सही विषय प्रस्तुत भएको छ । चर्चित व्यक्तिहरूको हनिमुन रमाइलो लाग्यो । हनिमुन जाने जोडीमा सिर्जना हुन सक्ने समस्या केलाएर समाधानको उपायसमेत दिएकाले धेरै मानिस यसबाट लाभान्वित हुन सक्छन् । हनिमुन किन जाने तथा यसले दाम्पत्य जिवनमा पार्ने असरलाई राम्रोसँग केलाइएको छ । हनिमुन जानुअघिको तयारीसम्बन्धी जानकारी पनि उपयोगी लाग्यो ।
सेतो लुगा लगाउँदैमा भगवान् हुने भए मरेका मान्छे सवै देउता हुन्थे । (गड ब्लेस यू कि ठग ब्लेस यू) यिनीहरू भगवान होइन, ठग हुन् ।
सेवामा आस्था हुँदैन, स्वार्थ हँुदैन, जात, धर्म र वर्ग हँुदैन । (कस्तो हँुदैछ क्रिसमस ?) हुन्छ त केवल मानवीयता, समवेदना अनि हार्दिकता । यहाँ त सेवाको नाम दिएर बाइबल भिराउने तथा धर्म परिवर्तन गराउने काम गरिन्छ । यसलाई सेवा होइन, धर्मको व्यापार भनिन्छ ।
विपिनले आफूलाई अब्बल कलाकार भएको प्रमाणित गरेका छन् । ( खुट्टा भाँचिएका विपिन हलमा) धेरै लामो समयपछि प्रसादमार्फत उनको जीवन्त अभिनय हेर्न पाइयो ।
यो साप्ताहिकले पनि के–के सिकाउँछ, सिकाउँछ ? (बार टेन्डरको बढ्दो माग) अलि राम्रा–राम्रा कुरा सिकाए पो हुने ? नेपालीलाई रक्सी कसरी बनाउने भनेर पनि सिकाइरहनुपर्छ ?
शक्ति गौचन (रोकिनै छैनन् शक्ति) नेपाली क्रिकेटका धरोहर हुन् । १६ वर्ष लगातार खेलमा समर्पित हुन सक्नु नै उनको महानता हो । उनको स्थान अब कुनै पनि नेपाली क्रिकेटरले लिन सक्दैनन् । राज्यले व्यवसायिक भैनसकेको क्रिकेटका लागि उनले गरेको मेहनतको कदर गर्नैपर्छ ।
विश्व बडी बिल्डिङ च्याम्पियन (देशका गौरव) लाई बधाई छ । नेताले देश लुटेर सके पनि तपाईंजस्ता युवा खेलाडी देशको नाम राख्न सफल हुनुभएको छ । अझ प्रगति गर्दै जानुहोस् ।
डा. रामदयाल राकेशजस्ता विद्वानका बारेमा साप्ताहिकले स्थान दिएकोमा धन्यवाद । शोसित–पीडितहरूका विरुद्ध खरो रूपमा उत्रने यस्ता विद्वानकै कारण मिथिला, मिथिला रहँदै आएको छ । खासगरी तराईजस्तो चरम जातीय भेदभाव, असमान विकास प्रणाली भएको ठाउँमा उनले बारम्बार उठाउने आवाजले हामी सबैलाई
सामाजिक काममा निरन्तर देख्न पाइयोस् । (बल्ल मिस नेपाल भएको अनुभव गरिरहेकी छु ।) यसअघिका अधिकांश मिस नेपालजस्तो बेपत्ता नहुनुहोला । राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएकी तपाईंजस्ती युवतीले अब राजनीतिमा लागेर त्यहाँको फोहोर फाल्न अग्रसर हुनुपर्छ ।
विद्यार्थीका लागि (विद्यार्थीलाई उपयुक्त ल्याप्ट) कुन ल्यापटप उपयुक्त शीर्षकको सामग्री व्यवहारिक छ । ब्याट्रीको लाइफदेखि मूल्य अनि प्रोसेसरसम्म सबै विषयमा जानकारी पाइयो । प्रविधिसम्बन्धी यस्ता सामग्री निरन्तर प्रकाशित हँुदै जानुपर्छ ।
बधाई छ, सिडी विजय अधिकारीलाई (भ्वाइअफ नेपाल सिडी विजय अधिकारीलाई) पहिलो भ्वाइस आफ नेपाल हुनुभएकोमा । यहाँको कला फैलँदै जाओस् । आगामी दिनमा तपाईंको सुन्दर आवाजमा उत्कृष्ट गीत सुन्न पाइरहियोस् ।
नेपाली चेलीहरूले लगातार एकपछि अर्को सफलता पाउँदा खुसी लागेको छ । (मिस युनिभर्स–२०१८ मा मनिताको उपलब्धि) यो सफलताले बल्ल नेपालमा छानिने मिस नेपालप्रति जनमानसमा सकारात्मक धारणा जाग्न थालेको छ । मिस नेपालमा शारीरिक सौन्दर्यका साथै बौद्धिकतालाई पनि गतिलो मापदण्ड बनाउँदै जानुपर्छ ।
धान्यपूर्णिमा प्रकृतिको पूजा गर्ने पर्व हो । (धान्य पूर्णिमा र योमरी महोत्सव) नेपाली कति प्रकृतिप्रेमी छन् भन्ने कुरा यस्ता संस्कार एवं संस्कृतिले देखाउँछ ।
प्रकाशित :पुस १४, २०७५
२०७६/०७७ को बजेट कस्तो लाग्यो ?
सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई प्रतिबन्ध गर्न गरेको निर्णय कस्तो लाग्यो ?